कसरी खेल प्ले गर्न Paypal क्यासिनो पैसा जम्मा गर्न? |
PayPal क्यासिनो – सजिलै शीर्ष खेल प्ले गर्न जम्मा मुद्रा!
PayPal को सजिलो र पहुँच प्रेम गर्ने खेलाडीहरूलाई, राम्रो संसार वर्ग मोबाइल क्यासिनो कार्य रूपमा एक सुखद आश्चर्य लागि हो: थप र मोबाइल क्यासिनो बेलायत अब एक प्रस्ताव PayPal क्यासिनो जो छिटो उद्योग मा सबै भन्दा ठूलो लाभ को एक बन्ने छ. वास्तविक पैसा जीत को लागि खेल चयन पनि पहिलेभन्दा राम्रो छ – खेलाडीहरू मोबाइल बाट भिन्न विकल्प भार छ PayPal ब्लेक र रूले, प्रगतिशील Jackpots गर्न, मोबाइल बिंगो र छनौट गर्न थप धेरै!
मा पूर्ण समीक्षा mFortune गरेको बिंगो लागि गेमिङ अनुप्रयोग, रूले, पोकर, स्लट & अझ बढी!!
फ्री साइनअप बोनस: सबै मोबाइल क्यासिनो केहि प्रकार को स्वागत बोनस प्रस्ताव – या त एक कुनै जम्मा स्वागत बोनस, निक्षेप बोनस, वा दुई संयोजन. तपाईँको पहिलो जम्मा गर्न तयार हुनुहुन्छ वास्तविक नगद लागि खेल्न सुरु गर्न, तपाईं पढ्नुभयो सबै मा पक्का बारेमा जान्नु आवश्यक बनाउन कसरी PayPal क्यासिनो काम सुनिश्चित गर्न कुनै पनि केहि मा बाहिर सम्झना छैन.
PayPal को लोगो मा क्लिक गर्नुहोस्, आफ्नो पहिलो जम्मा गर्दा एक विकल्प वा चयन छ! कि सबै भन्दा अनलाइन क्यासिनो पनि पहिलो एक नगद जम्मा मिलान बोनस प्रस्ताव सम्झना, दोस्रो, वा तेस्रो जम्मा. तपाईंले तिनीहरूलाई सबैभन्दा बनाउन यी उदाहरणहरु मा सही रकम जम्मा सुनिश्चित!
तपाईं बारेमा थाह छ पकेट Fruity गरेको 400% जम्मा मिलान बोनस?
तपाईंको PayPal प्रयोगकर्ता नाम तपाईं खाता सिर्जना गर्न प्रयोग इमेल ठेगाना छ, साथै पासवर्ड रूपमा स्थापित. तपाईं आफ्नो पासवर्ड भूल गर्नुभएको छ भने, बस तपाईंलाई इमेल गरिने निर्देशनहरू पालना.
न्यूनतम जम्मा आवश्यकताहरु: यी क्यासिनो देखि क्यासिनो गर्न फरक हुनेछ, तर खेलाडीहरू लगभग £5देखि न्यूनतम जम्मा रकम आशा गर्न सक्छौं, £ 10 र न्यूनतम withdrawals.
तपाईं आफ्नो आदेश पुष्टि गर्न Paypal व्यापारी साइटमा पुन: निर्देशित गरिनेछ, साथै निक्षेप रकम रूपमा.
तालिका अन्तर्गत PayPal जम्मा थप! पढाइ जारी गर्न तल स्क्रोल गर्नुहोस्!!
PayPal जम्मा: PayPal क्यासिनो मा बनाएको जम्मा तात्कालिक छन्. एक पटक तपाईं भुक्तानी पुष्टि प्राप्त गर्नुभएको, यो उपयुक्त राशि संग जम्मा गरिएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आफ्नो मोबाइल क्यासिनो खातामा फिर्ता जाँच.
म किन Paypal मार्फत एक क्यासिनो गर्न जम्मा गर्न सक्दैन?
दुर्भाग्यवश, PayPal क्यासिनो भुक्तानी विकल्पहरू जताततै उपलब्ध छैन. संयुक्त राज्य अमेरिका देखि खेलाडीहरू उदाहरणका लागि वैकल्पिक विधि चयन गर्न सन्देश तिनीहरूलाई अनुरोध प्राप्त हुनेछ.
PayPal क्यासिनो प्रतिबन्ध: रूपमा उल्लेख, त्यहाँ सीमा सन्दर्भमा केही देशका प्रयोगकर्ता मा राखिएको प्रतिबंध, शुल्क आदि. बेलायत बाहिर खेलाडी बाहिर बारे थप पत्ता लगाउन दुवै PayPal र अनलाइन क्यासिनो वेबसाइटहरूमा जाँच गर्न सल्लाह छन् PayPal स्वीकृत क्यासिनो.
म मेरी Paypal क्यासिनो खातामा Winnings निकासी गर्न सक्नुहुन्छ?
पक्कै पनि! किन PayPal क्यासिनो त राम्रो प्रेम छ कि छ! लेनदेन चिल्लो छन्, सजिलो र परेशानी मुक्त. खेलाडी अनलाइन क्यासिनो आफूलाई फिर्ता लिया गर्न सकिन्छ भनेर न्यूनतम रकम मा एक प्रतिबन्ध राख्न सक्छ कि सम्झना गर्न आवश्यक. तर, भनेर मोबाइल क्यासिनो खेलाडीहरू घर ठूलो पैसा winnings लिन दिन सबै अवसर विचार मुद्दा हुँदैन!
मा बाहिर सम्झना छैन पकेट विन गरेको मुफ्त खेल डाउनलोड!